အင်္ဂလိပ်စာဘယ်လိုရေးမလဲအပိုင်း-၂ (စာပိုဒ်ဖွဲ့စည်းခြင်း) - Myanmar Network
Posted by AungKoU (UMK) on December 2, 2012 at 21:28 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယခင်တစ်ပတ်ကတင်ပြခဲ့သောစာတစ်ပုဒ် ရေးသားရန် အတွက် အစီအစဉ် အဆင့်ဆင့် စီစဉ်ပြီးလျှင် ယခုတစ်ပတ်တွင် စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကိုမည်သို့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆေက်ရမည်ကိုဆက်လက် တင်ပြသွားပါမည်။စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ် ရေးသားရာတွင် Topic Sentence, The Body (Supporting sentences), The Concluding Sentenceဟုအစိတ်အပိုင်း (၃) ခုပါဝင်ပါသည်။
Topic Sentence သည် စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်၏ အရေးကြီးဆုံးသောဝါကျပင်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် စာပိုဒ်၏ အဓိကကြောင်းအရာကိုဖော်ပြနိုင်ရမည်။၎င်းကစာတစ်ပိုဒ်လုံး၏ဆိုလိုရင်းကိုပေါ်လွင်စေရပါမည်။Topic Sentence တွင် Topic နှင့် Controlling Idea ဟူ၍ ၂ ပိုင်းပါရှိသည်။ Topicဆိုသည်မှာစာပိုဒ်၏ အဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးControlling Idea ဆိုသည်မှာတင်ပြမည့် အဓိကအကြောင်းအရာကိုပေါ်လွင်အောင် ဖော်ပြပေးရမည်။
ဥပမာ 1.New York has excellent public transportation.
2. New York has interesting people.
3. The modern study of biology consists of three basic areas.
4. There are four main kinds of love.
controlling idea Topic
5. Planningascientific experiment requires five specific steps.
THE BODY (SUPPORTING SENTENCES)
အဓိကအကြောင်းအရာကိုတင်ပြပြီးလျှင်စာကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ရပါမည်။၎င်းကစာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်လုံး၏အဓိကအကြာင်းအရာကိုပေါ်လွင်အောင်အသေးစိတ်ရေးသားဖော်ပြရပါသည်။အသေးစိတ်အချက်အလက်၊ဥပမာများ၊ အတွေ့အကြုံများဖြင့်စာပိုဒ်ကိုအသက်ဝင်လာအောင်ရေးသားရပါမည်။Topic Sentence ကိုအထောက်အကူပေးနိုင်ရန် နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။
အများဆုံးရေးသားသောပုံစံတစ်ခုမှာအကြောင်းအရာအချက်အလက်များ နှင့် ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုကာတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
ဥပမာ(၁) Colorado is an interesting state. It has 104.247 square miles and almost three million people. Since 1920, the percentage of rural dwellers has sharply decreased, going from 51.8 % in 1920 to 19.4 % in 1980. Colorado is called the Centennial State because it joined the Union in 1876, one hundred years after U.S declared its independence. Colorado's main industries are mining, manufacturing, agriculture, and tourism. As most residents would say, Colorado isagreat state.
တိကျသောဥပမာဝါကျများဖြင့်လည်း Topic Sentence ကိုပေါ်လွင်အောင် တင်ပြနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ(၂) Colorado is an interesting state. It is perhaps best known as the Rocky Mountain State. Indeed, these mountains seem to dominate most views in Colorado. Denver and Colorado Springs are the state's two largest cities. Both have unique identities. Not far outside Denver is Red Rocks. This isabeautiful natural amphitheater where some of Denver's most memorable concerts have been staged. In the southwest corner of the state is Mesa Verde, where there are ancient Indian cliff dwellings. All in all, Colorado isagreat state.
သရုပ်ဖော် အရေးအသားများဖြင့်လည်း Topic Sentence ကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အများအားဖြင့် ကိုယ်ပိုင် အတွေအကြုံကိုအခြေခံကာဖော်ပြလေ့ရှိကြသည်။
ဥပမာ(၃) Colorado is an interesting state. On our vacation there last summer, we went hiking in the Rocky Mountains. These mountains stretch from north to south through the entire state. We also visited my cousin who lives in Denver. The U.S Mint was the most fascinating place in that city for me. Later on, we saw some old Indian dwellings in Mesa Verde. These houses were actually built in cliffs! Colorado is definitelyagreat state foravacation.
Concluding Sentence ကိုရေးသားလျှင် အဓိကအကြောင်းအရာကိုတိကျပေါ်လွင်ပါစေ၊ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်၏ အဆုံးသတ် Concluding Sentence သည် နောက်ထပ်စာပိုဒ် တစ်ပိုဒ်၏ Topice Sentence နှင့် ဆက်စပ်နေရပါမည်။
ဥပမာ- For three reasons, sea level raise isaclimate change impact. (Concluding Sentence)
Another key stressor from climate change is extreme weather. (Topic Sentence in following paragraph)
Concluding Sentence သည် Topic Sentence ၏ ဆိုလိုရင်းကိုဆက်စပ်မိစေရပါမည်။ Concluding Sentence ၏ အရေးပါမှုကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံ Concluding Sentence မလိုအပ်သည် ကိုလည်းတွေ့ရသည်။"in conclusion", "in summary", "in closing", or "as shown in the essay."စသည့် မလိုလားအပ်သောအဆုံးသတ်ပုံစံများဖြင့် Concluding Sentence ကိုမရေးသင့်ပါ၊ အဆိုပါပုံစံများသည် ပြောစကား (Spoken English)များတွင်သာအဓိကသုံးလေ့ရှိပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံမိမိပြောလိုသောဆိုလိုရင်းကိုထိရောက်ရန် စကားလုံးအနည်းငယ်သာအသုံးပြုရန်လိုပါသည်။
Concluding Sentence ကိုရေးသားရာတွင် အခြေခံအားဖြင့် ပုံစံ နှစ်မျိုးဖြင့် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ ပထမပုံစံတစ်မျိုးမှာ Topic Sentence ကို ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးစကားလုံးအသုံးအနှုန်းကိုမတူစေရန် သတိထားရပါမည်။ဒုတိယပုံစံတစ်မျိုးမှာတင်ပြခဲ့သောအကြောင်းအရာအားလုံးကို အနှစ်ချုပ် ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
စာတစ်ပိုဒ်ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် Hamburger တစ်ခုကဲ့သိုပင် Topic Sentence နှင့် Concluding Sentence ဟူသောပေါင်မုန့် ၂ ချပ်ကြားတွင် Supporting Sentences ဟူသောအဆာပလာများထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြင့် စာတစ်ပိုဒ် ဖြစ်လာသည်။ဟန်ချက်ညီသောစာပိုဒ်တစ်ပိုဒ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက် နိုင်ရန်အတွက်အခြေခံစာပိုဒ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုရေးသားတင်ပြ လိုက်ပါသည်။
Phone : (95)9421752568
ဘယ်လိုရေးမလဲ (၂).pdf, 136 KB
Permalink Reply by 2xfe8d4odf1y4 on December 4, 2012 at 14:05
Permalink Reply by Hninn Wai Wai on December 4, 2012 at 14:40
Permalink Reply by padout,layy on December 5, 2012 at 2:56
Permalink Reply by Soe Thet Htun on December 5, 2012 at 6:56
Permalink Reply by saw april on December 5, 2012 at 8:55
Permalink Reply by koyemyinttun on December 5, 2012 at 9:19
Permalink Reply by thanthansoe on December 10, 2012 at 14:21
Permalink Reply by Ratan Biswas on January 7, 2013 at 14:18